Rasmiga ah Android 2.2 Rom ee Htc Magic / MyTouch 3G La heli karo | Androidsis
T-Mobile ayaa maalmo ka hor shaacisay inay soo bandhigi doonto Nooca Android 2.2 ee boosteejadaada Mytouch 3G ama waa maxay Htc Magic isku mid ah. Noocaan ayaa hadda loo heli karaa si toos ah looga soo dejisan karo server-yada Google ama halkan iyo inkasta oo bilaabashadiisu aysan weli rasmi ahayn, waxay umuuqataa inaysan qaadan doonin waqti dheer in la yimaado.
Terminalkan wuxuu leeyahay qalab la mid ah qalabkii Vodafone ku suuq geeyay Spain wuxuuna umuuqdaa inuu si fiican u shaqeynayo. Laga soo bilaabo golayaasha htc mania Iyo ka soyandroide-ka blog-ka waxay yiraahdaan si aad u rakibto waa inaad soo dejisaa oo keliya, nuqul kaarka SD-ga ah oo ka soo kabashada ku dheji sidii rooma kale.
Rakibay oo shaqeynaya. Xidhiidhkii ugu horreeyay wuxuu i siiyay khaladaad markii aan isku dayay inaan ku boorriyo romerka laakiin xiriirka labaad oo qumman Waxaan haystaa soo kabashada oo wax laga badalay AmonRA 1.7. Rakiibintu waxay ka kooban tahay oo keliya nuqul ka sambaynta SD-ga iyo soo galista qaabka soo-kabashada terminal (riix furaha guriga iyo awoodda isla markaa) Mar uun soo kabashada, raadi zip si aad u rakibto oo aad maamusho
Uma laha wax taageero ah waraaqaha sawirada leh laakiin sawirka cusub ee warbaahinta badan ayaa la rakibay. Haddii kale romku si fiican buu u socdaa laakiin mucjisooyin ha filan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Rasmi ah Android 2.2 Rom for Htc Magic / MyTouch 3G la heli karo
Waa hagaag, waxba, aan aragno haddii geesinimo jirto
Ku jawaab Vindius
Ma ogtahay haddii tani ka shaqeyso HTC Magic 32A?
Ku jawaab c0olcast
Romku miyuu ku shaqeeyaa taleefannada gacanta iyada oo aan xidid la helin ama wax laga beddelayn wax laga beddelay? Tan waxaan u iri maxaa yeelay anigoo sarkaal ah, malaha waxaan ku ridi karaa walaashay oo aan xidid ahayn.
Waxaan qabaa shaki la mid ah kan David. Agtayda waxaan haystaa lammaanahayga oo isku dayaya inuu kor u qaado Magic Vodafone ilaa 2.1 ama 2.2 oo isagu wuxuu leeyahay SPL kaamil ah kuwaas. Miyay ROM-kan u oggolaaneysaa - mid ka mid ah xiriiriyeyaasha ama midka saxda ah - inuu cusbooneysiiyo asalka 1.6?
Lama sameyn karo haddii aadan horey u rakibin soo kabasho. Sida xididka, waxaad tahay xididka kaliya marka romisku ku siiyo ogolaansho inaad ahaato. Taasi waa, waa inaad raacdaa tillaabooyinka xididdada sixirka loo samaynayo laakiin halkii aad ka dhigan lahayd romaad xididaysan ayaad middan dhigaysaa.
HADDII aadan had iyo jeer waxyar sugi karin, OTA rasmiga ah diyaar ayey ahaan doontaa dhowaan waan filayaa.
Jawaab ku bixi Ekine
Waan tijaabiyey waana tan ugu wanaagsan ee aan abid rakibay.
Xaaladdayda waxaan ku haystay sixir xidid ah, markaa ma sheegi karo haddii ay mid ku shaqeyso aniga oo aan taaban
Waxa aan runtii u xiisay ayaa ah inaan awoodo inaan ku xirnaado shabakad ad-hoc Wi-Fi ah, guriga waxaan marwalba ku xiraa internetka aniga oo adeegsanaya laptop-kayga hadana ma awoodo xitaa inaan ku xirto Ma jiraa qof garanaya sida si fudud loogu sameeyo si fudud? Midkoodna cuntooyinka aan ka helay inay ka sameeyaan emulator-ka terminal ma ii shaqeyn !!!
Marka laga reebo guuldaradan (dufanka, ugu yaraan aniga ahaan) romka gebi ahaanba waa lagula talinayaa.
Kaliya waxaan shiday tijaabada 2, ota waxay i siisay qalad "nosignature (539 faylal), ilaa iyo hada si fiican ayey u shaqeysaa, oo ka fiican kuwa kale ee aan isku dayay. isla marka aad isku daydo suuqa iyo gps-ka. Aniga ahaan waxay ahaayeen meelaha muhiimka ah ee daciifka ee cm6.
Waxaan leeyahay amonra 32b
Ku jawaab erkv
Hagaag, anigu xidid baan ahay, dib ayaan u sameeyaa (laga bilaabo Rom Manager: ClockworkMod recovery) waxna ma jiraan, jid ma jiro.
Waxaan dib u magacaabay labada fayl si aan u cusbooneysiiyo.zip iyo waxba. Waxaan ka dhigay iyaga .zip wax ku cadaadinaayo iyaga waxna ..
Ma garanayo waxa kale ee runta la sameeyo, caawimaad yar?
Ku jawaab cirridka
gnurbs, laga bilaabo rommanager, ku rakib soo kabashada amonRA 1.7, dib u bilaw soo kabashada, halkaasna waxaad ka daalaysaa siib
markaa waan rakibay
si aad u wanaagsan ayey u socotaa, ilaa iyo haddana wax dhibaato ah ma jiraan
Waad salaaman tihiin, waad ku mahadsantihiin caawimaadda, laakiin waxba ma jiraan, weli ma shaqeyneyso.
Hadda waxay i siinaysaa qaladka 1339 ...
Miyaan sifeeyaa galka (oo dib ugu magacaabaa cusbooneysiinta.zip) ama unbaan u cusbooneysiiyo update.zip? kani ma qaladbaa? (inkasta oo aan labadaba isku dayay ... markaa ma arko sababta)
Maxaan khaldami doonaa!?
Ma ka fiican tahay CyanogenMod 6? Runtii aad ayaan ugu faraxsanahay ROM-kan. Android 2.2, laakiin xoogaa horumar ah.
Ma u soontaa dadka aan xitaa lahayn kala-beddelasho? Qeybinta waa ku-xigeen aniga, si kastaba ha noqotee, la'aanteed, Android 2.2 waa mid aad u gaabis ah oo ku saabsan Magic.
Ku jawaab aderatorre
Aniga ahaan, kun jeer kafiican, marka laga reebo dhibaatooyinka Wi-Fi, hada iima ogola in aan ka raadiyo shabakado kanaalada dhaadheer sidoo kale, marka Wi-Fi xafiiska kuma qabsado. Nasiib darrose, haddaanan tan dhaqaajin karin, waa inaan dib ugu noqdaa cyano haddii kale heerka xogtu wuu i baabi'inayaa.
Hagaag, aakhirkii kan ma uusan dhigin ee wuxuu ahaa Cyan, maxaa yeelay midkaan lagama cusbooneysiin "bikro" 1.6. Haddii ay dhacdo in qof kasta uu xiiseynayo, wuxuu isticmaalay nidaamka Maamulaha ROM ka dib markii uu dhigay bikrad badan 1.6 xitaa HBoot, in kasta oo aan u maleynayo in waxyaabaha qaar ee buugga Maamulaha ROM-ku sheegaan aysan gebi ahaanba run ahayn (doorashada Sixirka ama Taabashada, waxaan qabaa)
Ma jiraa qof isku dayay Google Ion? (Sidoo kale loo yaqaan ADP2)
Waxaan dhowaanahan lahaa CM 6, laakiin waxaa laga yaabaa inaan isku dayo tan.
Qof ma ii sheegi karaa haddii barnaamijyada google ay la socdaan romka (haddii ay rasmi tahay, waxaan u maleynayaa inay sidaas tahay) mise waa in si gooni ah loo rakibaa?
Ku jawaab yoandroide
Subax wanaagsan dhamaantiin,
Shalay waxaan rakibay ROM-ka waxaanan odhan karaa way fiicantahay.
Wixii «» »yoandroide» »», barnaamijyada google-ka waxaa ka jiray khariidado, gmail iyo gtalk haddii aanan si sax ah u xusuusan, markii dambena waxaan dhigay khariidado cirka iyo goglo iyo kuwo kale.
Codsiyada: qaar baa maqan oo horeyba ugu yimid noocyo la kariyey sida "wararka iyo cimilada" iyo qaar kale, laakiin haye, waxay suuqa ka raadinayaan waxyaabo kale oo dhibaato ah.
Batariga: Waqti dheer ayaan ku qaatay indha indhaynta suuqa iyo soo degsashada barnaamijyadaydii aan haystay ka hor rakibaadda umana muuqan in isticmaalka aad hoos ugu dhacayo, waa inaan si fiican u tijaabino
Salaan ka dib oo arag waxa "casaanku" dhahayo.
PS: sidaan meelo kale ku arkay, waxaan cadeynayaa Shimbiraha careysan hada wey ila shaqeysaa, midkii la kariyeyna meel looma maro waxayna igu qaadatay waqti dheer in aan rarto kadibna shaqadii ma dhameysan.
Waa inuu arkaa !!! Waqti badan ayaan haystay sixir 32B illaa ay ka afuufayaan. Ugu dambeyntiina fadhi ayaa i siinaya mid cusub waana uun 32A. Ka farxad badan waxa. Laakiin hadda waxaan arkaa tan waxaanan qiyaasayaa inay kaliya ku habboon tahay 32B. Qofna ma hubin karaa?
iga raali noqo 🙁
Waxaan haystaa mt3g oo waxaan rabaa inaan rakibo froyo, kaliya
waxaan ka baqayaa inay shaqada joojiso maxaa yeelay ma aqaan nooca
Waa, haddii 32a ama 32b, oo weliba aanan wax yar ka aqoon nidaamka rakibaadda, qof ma i caawin karaa !! Waan ka mahadcelin lahaa
Wax kasta oo aan sameeyo, hal nooc oo ka mid ah Soo-kabashada ama tan kale, oo leh froyo ka socota Google ama MGTEst2, masax ama masax marwalba way i siisaa:
E: Saxiix ma leh (1336 faylal) ama E: Saxeex ma jiro (faylasha 1226)
Waxaan rakibay siib, kumana siinayo qalad rakibaadda. markay dib u bilaabato waxay ku sii jirtaa astaanta Android iyadoo nalka iftiiminaya bidix ilaa bari midig.
Miyay sidan oo kale qof ku dhacday mise waad garanaysaa sababta ay u noqotay?
Nabadeey Jose, sida saxda ah isla waxii igu dhacay, waa inaan ku noqdo cyanogen anigoon awoodin inaan tijaabiyo.
Waxaan dib ugu noqday keydkii hore ee aan sameeyay iyo na, halkan waxaan raadinayaa ROM ka duwan kaas oo lagu soo dejin karo halkan si aan u arko haddii nasiib jiro. Haddii aad wax ka hesho, ama aad ogtahay sababta, ha uga raagin inaad ii sheegto mo Waxaan isticmaalay 2.2 aan rasmi ahayn oo loo yaqaan 'movi' waana mid aad u wanaagsan, xoogaa gaabis ah, laakiin aad uga fiican codsiyada.
Waxaan rartaa waxa aan rarto, kaliya waxaan helayaa markaan bilaabayo soo kabashada waxaan helayaa digniin ku saabsan saddexagalka, iyo ka hooseeya sawirka sixirka.
markaan dib u bilaabayo, tii hore ayaa i rarta.
romka kaliya ee aan maareeyay inaan rarro waa nuqul keydkeyga ah ...
maxay noqon kartaa
Ku jawaab blimea
Waxaan daaray sixirka htc 3 waxayna iga codsatay oo kaliya inaan cusbooneysiiyo, voilana waa la cusbooneysiiyay iyadoon wax soo kabasho ah ama wax ah jirin, waxa xun ayaa ah in cel celisku gaabis yahay
Ku jawaab aleks
My htc ayaa ku dhaawacmay adoo rakibaya cyanogen mana garanayo sida loo soo celiyo nidaamka qalliinka
Ku jawaab Elreal91
tan laguma sameyn karaa garminfone asus a50? caawin fadlan waxaan ahay wadar noob hehe 🙂
Ku jawaab lildark
Moobaylkani waa kan ugu gaabiska badan uguna xun suuqa
Cristhyan 6524 dijo
Http dhiirrigelinta hd ee aan haysto waa mashiinka ugu fiican ee aan abid leeyahay
Dhammaan xiriiriyeyaasha ayaa hoos u dhacaya, fadlan soo rar mid kale, waxaan ugu baahanahay si deg deg ah
Steve Jobs wuxuu weerarayaa qof walba oo ka bilaabaya Android, ma wuxuu noqon doonaa neerfayaal?